Inpeller O-ring-064 Inpeller O-ring-064 Winclan Waxaan ku raaxeysaneynaa awood farsamo oo xoogan, qalab aad u fiican iyo qalab baaris oo qumman, sidaa darteed waxaan kuu soo bandhigi karnaa badeecado tayo sare leh qiime tartan ah. Nala soo xiriir Naga / Mabda'eenu waa tayo fiican, waqtiga rarida, qiime macquul ah. Laga soo bilaabo bilowgii yaraa ee 2004, Winclan Pump wuxuu u koray inuu noqdo ciyaartoy laga cabsado suuqa bamka caalamiga ah. Waxaan nahay ...
Warshadda Kala Bixiyeyaasha Kala-baxa ah-029-A05 Warshad Winclan Qalabka Wax-Soo-Saarista ah Waxaan ku raaxeysaneynaa awood farsamo oo xoog leh, qalab aad u fiican iyo qalab baaritaan oo kaamil ah, sidaa darteed waxaan ku siin karnaa badeecado tayo sare leh qiime tartan leh. Nala soo xiriir Naga / Mabda'eenu waa tayo fiican, waqtiga rarida, qiime macquul ah. Laga soo bilaabo bilowgii yaraa ee 2004, Winclan Pump wuxuu ku soo kordhay inuu noqdo ciyaartoy laga cabsado Intern ...
Qashin-Qubka Badeecada-028-A05 Yaobang Qariirayaasha Sifeeyaha ayaa 100% lagu beddeli karaa bamka lagu shubo AH. 1.5 / 1B-YA Sumadda Sumadda Soodhawaynta: B028 2 / 1.5 B-YA Qashin saarida summada: B028 3/2 C-YA Qashin saarida Koodhka: C028 4/3 C-YA Qasabeeyaha Kumbiyuutarka: D028 4/3 D-YA Slurry Koodhka bamka: D028 6/4 D-YA Soodhawrka Summada: DAM028 6/4 E-YA Soodhawrka Summada: E028 8/6 E-YA Sumarka Soodhawaynta: EAM028 10/8 ST-YA Qashin Qubka Sumarka: SH028 12 / 10 ST-YA Soodhawrka Sumadda: SH028 14/12 Koodhka Soodhawaynta ST-YA: SH028 ...
AF Froth xumbo saar
AF Froth xumbo saar bamka FROTH slurry bamka AF taxane AF taxane bamka slurry waa shirkadeena soo saarida ee waxtarka sare iyo tamar-keydinta, kaas oo lagu soo saaray Shijiazhuang Pump Works'introduction technology ee Australia Pump Company. Astaamaha: Qaab-dhismeedka dahaadhka laba-laabka ah, looma baahna shaabbad usheeda dhexe iyo biyo xirashada; waxtarka sare, xirto u adkeysi, waxqabad xasiloon, isku imaatin fudud, awood fiican oo lagu jebiyo xumbada, laguna galiyo suun Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka hadda jira ...
Mashiinka Wadada Joogtada ah
YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump The YS taxanaha Vertical Sump Slurry Pump waxaa loogu talagalay codsiyada u baahan kalsooni sare iyo adkeysi ka badan bambooyin habka caadiga caadiga ah. Macluumaad gaar ah sida soo socota: Dhexdhexaadiyaha Dhexroor 1.5 ″ ilaa 10 ″ (40mm ilaa 250mm) Heerarka Heads ilaa 160ft (50m) Heerka Qulqulka ilaa 6,000gpm (1,350m3 / h) Tusaalaha tusaalaha: 40PV-YS 40: Ballaca Ballaca PV: tray taagan YS : Yaobang bamka YS taxanaha YS bamka waa dhisme bir adag, YSR p ...
YS Sump slurry saar
YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump YS taxanaha Vertical Sump Slurry Pump waxaa loogu talagalay codsiyada u baahan kalsooni sare iyo adkeysi ka badan bambooyin habka caadiga caadiga ah. Macluumaad gaar ah sida soo socota: Dhexdhexaadiyaha Dhexroor 1.5 ″ ilaa 10 ″ (40mm ilaa 250mm) Heerarka Heads ilaa 160ft (50m) Heerka Qulqulka ilaa 6,000gpm (1,350m3 / h) Tusaalaha tusaalaha: 40PV-YS 40: Ballaca Ballaca PV: tray taagan YS : Yaobang bamka YS taxanaha YS bamka waa dhisme bir adag, Mashiinka YSR waa r ...
YG Gravel Pump YG taxane Sand Gravel Pump YG taxane Sand Gravel Pump waa hal marxalad, hal sanduuq, hal bamka wareega jiifka. Jidka socodka weyn wuxuu sameeyaa bamka u oggolaada walxaha adag ee walxaha waaweyn. Qaab-dhismeed fudud iyo shaashad aluminium sare leh oo chrome ah ayaa sameeya Sand Gravel-ka bamka cimriga dheer iyo dayactirka fudud. Macluumaad gaar ah sida soo socota: Dhexdhexaadiyaha Wareegyada 4 "ilaa 16" (100mm ilaa 400mm) Heads Heerarka 230ft (70m) Qulqulka socodka 8,000gpm (4,100m3 / h) Dulqaadka Cadaadiska Cadaadiska 300psig (2,020kPa) Model meani ...
YJ Dhuxul Miisaanka Saarista Dhuxul
YJ Dhuxul Mashiinka Soo Saarida Mashiinka YJ taxanaha culus ee culus waa bakeeri jireed oo hal-wareega ah, hal-nuugid, axial-nuugid ah iyo bambooyin laba-tuug ah oo laba jibbaaran. Laanta sii-deynta waxaa lagu meeleyn karaa inta u dhexeysa 45 digrii iyadoo la codsado loona jiheeyo sideed meelood oo ay ku habboon tahay rakibaadda iyo codsiyada Faahfaahinta: Awoodda / Qulqulka: 4-2500m3 / h Madaxa / Lift: 9-130 m Xawaare: Awood rpm: 0.55- 800kw Cufnaanta Dhexdhexaad: PH of Med ...
YL Ultra culus waajibaadka saar
YL Ultra Duty pump Bump FEATURES • Qiyaasta cabirka (dheecaanka) 2 "ilaa 4" 50 mm ilaa 150 mm • Awoodda ilaa 1,000 gpm ilaa 250 m3 / hr • Madax ilaa 150 ft ilaa 46 m FAA'IIDOOYINKA • Iskuxirka dhalista - dhidib ballaadhan oo ballaadhan Gaabis gaaban wuxuu yareeyaa leexashada wuxuuna wax ku biiriyaa nolosha qaadashada dheer. Kaliya afar ilaa handarraabbadeedii ayaa looga baahan yahay inay ku hayaan guryaha nooca kaydadka ku jira. • Khadarro - safafka si fudud loo beddeli karo ayaa lagu xayiray, laguma dhejin, keydka isku xirnaanta togan iyo bariga ma ...
Nooca Haanta Madax-dhaqameedka Sare ee YH Hordhaca Nooca bambooyin qulqulaya YH waa mashiinno jiif ah, jiif ah, oo labalaab ah. Mashiinka saxanka jirkiisa iyo mashiinka wax lagu shubo ee loo yaqaan 'YH pump' wuxuu ka samaysan yahay bir bir u adkaysata. Xirmooyinka usheeda dhexe ee taxanaha YH ayaa dooran kara shaabadda qanjidhada ama shaabadda cayrinta. Laanta sii-deynta waxay u jihaysan kartaa mid ka mid ah siddeed meelood si ay ugu habboonaato rakibidda iyo codsiyada. Codsiga Waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo walxaha aadka u xoqan, cufnaanta sare ee birta ...
YA Lined Slurry Pump YA taxanaha Qeybinta Sariirta Dhaawaca ee Yiprifing Pump is a end-nuction, split-case, centrifugal slurry pump, it is haboon deegaanka liita ee miinada. 27% birta cad ee chrome ama qaybo caag ah oo qoyan ayaa ka dhigaya mashiinka cimri dherer, qaab dhismeedka fududna wuxuu ka dhigayaa mashiinka mashiinka dayactirka iyo bedelida safka si fudud. fe ...